ဂါဇာကမ်းမြှောင်ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကုလမဲခွဲဆုံးဖြတ်
ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေ ဂါဇာဒေသမှာ အစ္စရေးရဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေကို လွတ်လပ်တဲ့ ကော်မရှင်နဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေး ဖို့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်နေ့က မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မ်ာဒယ် သရုပ်ဆောင် ကောင်းမြတ်ဟိန်း(ခ) ကျော်ဇောဟိန်း သေဆုံးမှုအား အင်း စိန်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ဇူလိုင် ၂၂ရက်တွင် စစ်ဆေးရာမှုခင်းဆရာ ဝန် ဆေးစစ်ချက်ကို ထွက်ဆိုချက် ရယူခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မစ္စယင်လတ် ရှင်နာဝပ်ကို အကိုဖြစ်သူ သက်ဆင်က ပွေ့ဖက် ကြိုဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ထိုင်း Khaosod မှာ အခုပဲ တက်လာပါတယ်။
လေယာဉ်ဆီ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကို အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ရန် ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုသာ တင်ဒါလျှောက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များတွင် အစိုးရနှင့် ပူးတွဲ၍ လေယာဉ်ဆီ တင်သွင်းရောင်း ချခြင်းလုပ်ငန်း ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရန် ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့် တင်ဒါလျှောက် ထားကြေ ကြာင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းရရှိ သည်။
ဘားအံတွင် တည်ဆောက်မည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ စိုးရိမ်နေ
ရန်ကုန်၊ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ နယ် မိကရင်ကျေးရွာအနီး ဘိလပ် မြေစက်ရုံ ဆောက်လုပ်မည် ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် ဒေသခံများ စိုးရိမ်မ ကင်းဖြစ်နေကြောင်း ယင်းတို့က ပြော သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ Union Civil Service Board နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများမှကောက်နုတ်ချက်
၁။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ၂၆-၃-၂ဝ၁၄ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ် ၁၂/၂ဝ၁၄ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ အဆိုပါနေ့မှစတင်၍အာဏာတည်ပါသည်။
လှူဒါန်းယာဉ်နံပါတ်ပြား အောက်ခံ အစိမ်းရောင် အသုံးပြုမည်
ပည်တွင်း ပြည်ပအလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာအ ဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များ အတွက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုး ရအဖွဲ့များ၊ NGO, INGO အဖွဲ့ များသို့လှူဒါန်းလာသည့် မော်တော် ယာဉ်များအား လွယ်ကူစွာခွဲခြားသိ ရှိနိုင်ရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ မူသေနံပါတ်ပြား အရောင်ပြောင်းလဲ သုံးစွဲမည်ဟု သိရ သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ဇူလိုင်လ၁ ရက်နေ့၊ ၂ ရက်နေ့နှင့် ၃ ရက်နေ့များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက် ၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များ တွင် ဖော်ပြပါရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်၏ နောက်ခံအကြောင်းအရာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိလိုက်ရသောအခါ သတိ တရားနှင့် အသိတရား နှစ်ပါးတို့၏ အရေးပါမှုကို သတိပြုခံစားလိုက်ရပါသည်။ ပဋိပက္ခတွင် အပြစ် မဲ့ပြည် သူ နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၁၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ အများပြည်သူ အထိတ်တလန့် အခြေအနေမျိုးကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရန်ငြိုးလေး တစ်ခုကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြည်သူများ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် အခြေအနေကို ဆိုက် ရောက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေမျိုး၊ ဤအတွေ့အကြုံမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားများ နောင်ဘယ်သောအခါမှ မကြုံတွေ့လိုတော့ပါ။ အခြားမည်သည့်အရပ်၊ မည်သည့်ဒေသတွင်မှလည်း မကြုံတွေ့ စေလိုတော့ပါ။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့် နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့ အကြား အယူအဆလွဲမှားမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိဟုဆို
မြန်မာ နိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အ တွက် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များကို ဥပဒေများအရ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိရာတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုဥပဒေနှစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးနောက် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအ မြင်တွင် နိုင်ငံသားများနှင့် ခွဲခြားဆက် ဆံမှုရှိသည်ဟု ယူဆသကဲ့သို့ နိုင်ငံ သားများကလည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများကို ပိုမိုအခွင့်အရေးပေး ထားသည်ဟု အယူအဆလွဲမှားခြင်း များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇေယျာအောင်က ပြောကြားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မန္တလေးမြို့၏ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့်နေရာများသို့ လိုက်လံကြည့်ရှုပြီးနောက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံ
မန္တလေးမြို့၌ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်နေရာများသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်း(င်)ဟီးလီမှ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်တွင် လာရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သံတော်ဆင့်ဂျာနယ်တာဝန်ရှိသူများအား အောင်သပြေစစ်ကြောရေးစခန်းတွင် ခေါ်ယူစစ်မေး
မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာ နယ်၏ ငွေကြေးစီးဆင်းလည်ပတ် ပုံနှင့် အယ်ဒီတာချုပ်၏ ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င် အသေးစိတ်ကို မေးမြန်း ရန် ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့က သံတော်ဆင့်အယ်ဒီတာချုပ် ဦး ကျော်စွာဝင်းအား အောင်သပြေ စစ်ကြောရေးစခန်းသို့ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မကွေးမြို့တွင် သီလရှင်တစ်ပါးအား အတင်းအဓမ္မ ဓားဖြင့်ထောက် ခေါ်ဆောင်ပြီး သားမယားပြုကျင့် ခဲ့သည်ဆိုမှုဖြင့် အမျိုးသားနှစ်ဦးကို မကွေး ခရိုင်တရားရုံးမှ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှား ခဲ့သဖြင့် ဇူလိုင် ၁၇ ရက်က ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကေအိုင်အိုအတွင်းရောက်ရှိနေသော ကလေးစစ်သားများ ယနေ့အထိပြန်လွှတ် မပေးသေးဟုဆို
ကေအိုင်အိုအတွင်းရောက် ရှိနေသော ကလေးစစ်သားများ လွှတ် ပေးရန် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်မှကတိပေး ပြောကြားထားသော်လည်း လက်ရှိ အချိန်အထိတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ တရားဝင်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေး ကြောင်း အဆိုပါအရေးအားလိုက် လံဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရှမ်းမျိုး နွယ်စုရေးရာအဖွဲ့မှ သိရသည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ သွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များသည် (၇)နာရီကြာ Operation တစ်ရပ်အပြီးတွင် ဆယ် ကျော် သက် လူငယ်တစ်ဦး၏ ပါးစပ်ထဲမှ သွားအသေး (၂၃၂)ချောင်းကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ခါကာဘိုရာဇီ ရေခဲတောင်ပေါ် မြန်မာအလံသစ်ကို လွှင့်မယ့်သူများ
ဂျပန်လူမျိုး အိုဆာကီနဲ့ မြန်မာလမ်းပြ နမားဂျွန်ဆင်တို့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ရောက်ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မြောက်ဖျားက ခါကာဘိုရာဇီတောင်ထိပ်ကို တက္ကသိုလ်ခြေလျင်နဲ့ တောင်တက်အသင်း သြဂုတ်လထဲ အရောက်တက်ပါတော့မယ်။ ဘာ့ကြောင့် ခါကာဘိုကို တက်ကြမှာလဲ။
ဂျက်လေယာဉ် ၂ စီး ပစ်ချမှု ရုရှားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယူကရိန်း ပြော
ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က ယူကရိန်းဂျက်လေယာဉ် ၂ စီးကို ပစ်ချခဲ့တဲ့ ဒုံးကျည်တွေဟာ ကနဦးစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုအရ ရုရှားကနေ လှမ်းပစ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူကရိန်း လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး ကောင်စီ က ပြောပါတယ်။
ကုလလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မန္တလေး ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီနှင့် မန္တလေးပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ တွေဆုံ့ဆွေးနွေး
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ရန်းဟီးလ်လီသည် ယမန်နေ့က မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့ ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်း
အသက်ကြီးပြီဖြစ်သော အဘိုးဟာ ကင်ဆာဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူဟာ ဆရာဝန်နှင့် ပြသခဲ့ရာ နောက်ထပ် ၆ လ အကြာတွင် သေဆုံးတော့မယ်ဟု ဆရာဝန်က ဆိုပါတယ်။
သက်ပြည့်ပင်စင် (၆၃)နှစ်သို့ တိုးမြှင့်မည်ဆိုသော သတင်း မမှန်ဟု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြော
ပြင်ပတွင် သတင်းထွက်နေသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ သက်ပြည့်ပင်စင်အား (၆၀)နှစ်မှ (၆၃)နှစ်သို့ တိုးမြှင့် မည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်မှုမရှိဘဲ လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေအရ သက်ပြည့်ပင်စင်မှာ (၆၀)နှစ် သာဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ ငွေတွေက တရုတ်နိုင်ငံက CCOEC လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတခုက ဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာရှင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ မြေးများ ယမန်နှစ်က အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ တချို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဦးတေဇပိုင်ဆိုင်သည့် အာရှစိမ်းလန်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ် (AGD) ၏ အရေးပါသည့် ရှယ်ယာတချို့ကို ၀ယ်ယူနိုင်ရန် ညှိနှိုင်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ကဏ္ဍနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍများလည်း ပါဝင်သည်။ AGD ဘဏ်၏ ရှယ်ယာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ၀ယ်ယူရန် ဦးတေဇနှင့် သဘောတူညီမှုရရှိ ထားပြီး နောက် ၆ လအတွင်း ရှယ်ယာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြှင့် ၀ယ်ယူသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက် မီဒီယာများက စုံစမ်းလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ဧရာဝတီ သတင်းဌာန အင်္ဂလိပ်ပိုင်းမှ သတင်းထောက် ကျော်ဆုမွန်က ဦးနေ၀င်း၏ အကြီးဆုံး မြေးဖြစ်သည့် ကိုအေးနေ၀င်းနှင့် မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံပြီး အဆိုပါ စီပွားရေး ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်မည့် ငွေများ၏ အရင်းအမြစ်နှင့် သူတို့၏ အနာဂါတ် အစီအစဉ်များကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးလေးဖတ်ကြည့်မိပါတယ် ။ ဒီမှာ နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိလာတယ်7DAY ကဆောင်းပါးရှင်ကို ဖတ်မိစေချင်ပါတယ် ။ ဂျာနယ်တိုက်က တာဝန်ရှိသူတွေလဲ သိစေချင်ပါတယ် ။ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုတပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ် ဆိုတာလဲသိတတ်နားလည်စေချင်ပါတယ် ။ ဒါဘာလဲ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ဆိုတာကို အသုံးချလိုက်တာလား ? ဒီဆောင်းပါမှာ ဖြေကြားပေးတဲ့ရဲအရာရှိဆိုသူကလည်း မီဒီယာက ဒီလိုစွပ်စွဲလိုက်ပြီ ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး မီဒီယာကိုသော်လည်းကောင်း အများပြည်သူကိုသော်လည်းကောင်း ရှင်းလင်းအောင် နားလည်အောင် သူမပြောတတ်ဘူး မပြည့်စုံဘူးပေါ့ဗျာ ။ သူ့အဖြေမှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်မပြည့်စုံဘူး ။အခုကျွန်တော်ပြောပါ့မယ် ရှင်းပါ့မယ် ဒီအထဲမှာ မီဒီယာကိုစိတ်ဆိုးပြီး တုန့်ပြန်တယ်လို့မထင်စေ့ချင်ပါဘူး အမှောင်ကိုဘာလို့ကြိုက်သလဲ? ဆိုတာကို ရဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအရရော မြန်မာပြည်ကလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပါ ထည့်ပြောမှပြည့်စုံမှာပါ ။
နယ်လှည့်ပါးရိုက်ရဲသည့် ၀န်ကြီးကို ဆန္ဒပြသူ ငွေဒဏ်ဖြင့် လွှတ်
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးမြင့်အေး ဝန်ကြီးဦးအုန်းမြင့်ကို ဆန္ဒပြနေစဉ်
နယ်တကာလှည့်၍ ပါးရိုက်ရဲသူဟု မကွေးတိုင်း ပြည်သူအချို့အား ပြောခဲ့သည့် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့် အလိုမရှိဟု ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြည်တွင် ဆန္ဒပြခဲ့သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးကို ထောင်ဒဏ်တစ်လ(သို့)ဒဏ်ငွေကျပ် သုံးသောင်းပေးဆောင်ရန် ပြည်မြို့နယ် တရားရုံးက ဇူလိုင်၂၃ရက်တွင် အမိန့်ချသည်။
ကျောက်ဖြူ - ကူမင်း ရထားလမ်းဖောက်လုပ်မှု
ကျောက်ဖြူ - ကူမင်း မီးရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကို ပြည်သူ့ဆန္ဒအရ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ နေပြည်တော်ကလာတဲ့ သတင်းနဲ့အတူ ရန်ကုန်က သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ဖော်ပြကြပေမဲ့ မီးရထားဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်ခံ မြန်မာ့မီးရထားဌာနက တာဝန်ရှိသူကတော့ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာဆက်လုပ် မယ် ဆိုတာ ဆွေးနွေးနေဆဲပဲလို့ ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာ က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဒီဗီဘီက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် လှည်းကူးမှ ခြံမြေအမှု ခြံစောင့်ဖြစ်သူ အမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲ
လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မြေကွက်နှစ်ကွက်အား သက်သေအတုများဖြင့် တရားလိုပြုခဲ့ကြောင်း တရားပြိုင်က သက်သေအစစ်များဖြင့် ထောက်ပြနိုင်ခဲ့သော်လည်း တရားရုံးက လက်မခံဘဲအမှုကို သက်သေအတုများဖြင့် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်ဟု တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ဦးဝင်းထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လားရှိုးယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က ကားခိုးအဖွဲ့ ကို နာရီ အနည်းငယ်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ
မန္တလေးမြို့ ၌ ကားခိုးမှု ကျူးလွန်ပြီး လားရှိုးမြို့ သို့တိမ်းရှောင်ရောက်ရှိ နေသူ တစ်ဦးကို လားရှိုး ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဇူလိုင်လ (၂၂) ရက်နေ့ က နာရီ အနည်းငယ်အတွင်း ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်ကြားရေးနှင့် ရွှေသံလွင် (Sky Net) ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုထားသည့် အကျိုးအမြတ်များအား တိကျရှင်းလင်းစွာဖြင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တောင်းဆို
ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည် ဆွေးနွေးစဉ်
ပြန်ကြားရေးနှင့် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ ဆောင်ရွက်ထားမှု အကျိုးအမြတ်များအား ပြည်သူများသိရှိရန် နိုင်ငံတော်မှ ရသင့်သည့် ဘဏ္ဍာငွေများကို တိကျရှင်းလင်းစွာဖြင့် လွှတ်တော်သို့ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပေး ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်က ဆွေးနွေးတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(NCCT) အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ၏ အစည်းအဝေးကို ယနေ့ (ဇူ လိုင် ၂၄ ရက်)တွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို)ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ လိုင်ဇာဒေသ၌ စတင်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
သတင်းထောက်တွေ ဖမ်းဆီးထောင်ချမှု လျှော့ပေးဖို့ သမ္မတကို ဦးရွှေမန်း တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို အစိုးရက ဖမ်းဆီးအရေးယူ ထောင်ချနေတာတွေကို လျှော့ချပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဒီနေ့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ ပေးပို့မယ့်သ၀ဏ်လွှာကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။"သတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ လက်ရှိဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)နဲ့ စာနယ်ဇင်း သတင်းမီဒီယာသမားများ အသီးသီးတင်ပြလာမှုများကို လွှတ်တော်အနေဖြင့်လည်း အလေးထား စဉ်းစားသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်၊ ထိုသို့ စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးမှုကို အချိန်မီရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်များပြေပျောက်ပြီး အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများလည်း လျော့နည်းပပျောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေနိုင်မည်ဟု စသဖြင့် သုံးသပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ပေးပို့အပ်ပါသည်"